लताको सम्पत्तिको मालिक को ? – Sahara Times
लताको सम्पत्तिको मालिक को ?
१७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १२:१५
‘भारत रत्न’ लता मंगेशकरको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनका निधनसँगै विभिन्न चर्चाहरु बाहिर आइरहेको छ । लताले सन् १९४२ मा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनले फिल्म ‘महल’ को गीत ‘आएगा आने वाला’ बाट पहिचान पाएकी थिइन् । लताले विश्वभरका करिब ३६ भाषामा ४० हजार बढी गीत गाएकी छन् । एक गायिकाका रूपमा यति लामो करियरमा लताले निकै सम्पत्ति जोडिन् । लताको कुल सम्पत्ति ५० मिलियन अमेरिकी डलरको आसपास छ । उनको अधिकांश कमाई गीतको रोयल्टी र त्यसको लगानीबाट प्राप्त हुन्थ्यो ।
उनले पहिलोपटक मराठी फिल्म ‘किति हसाल’ का लागि गीत गाएकी थिइन् । यो उनको पहिलो गीत कहिल्यै रिलिज भएन । उनको पहिलो कमाई २५ रुपैंयाँ थियो । तर जीवनको अन्तिम क्षणसम्ममा उनी करोडौं सम्पत्तिको मालिक बनेकी थिइन् । अन्तिम समयसम्म उनको मासिक आम्दानी ४० लाख रुपैंयाँ थियो ।
लताको दक्षिण मुम्बईको पेडर रोडमा घर छ, जसको नाम प्रभुकुञ्ज भवन हो । उनी यही घरमा बस्थिन् । यो घरको मूल्य करोडौं पर्छ । लता कारको शौखिन थिइन् र उनीसँगै शेवरले, ब्युक र क्रिसलर ब्रान्डका गाडी थिए । लतालाई फिल्म निर्माता यश चोपडाले ‘वीर जारा’ को गीत रिलिज हुनासाथ एक मर्सिडिज कार उपहार दिएका थिए ।
लताले आजीवन विवाह गरिनन् । उनलाई दागबत्ती उनको भाइ हृदयनाथ मंगेशकरले दिएका थिए । जो अब लताको सम्पत्तिको मालिक हुन सक्छन् । यद्यपि अहिलेसम्म मालिक को हुने भन्ने आधिकारिक खुलेको छैन ।
Tags: #bollywoodfilm, #latamangeshkar
लाराले किन खेल्न चाहदैनन यी विज्ञापन ?
आफूलाई सलमान र अभिताभको दर्जामा राख्छिन् कंगना
५ बैशाख २०७९, सोमबार २२:४४
कहाँ हराइन आशा टाकिया ?
५ बैशाख २०७९, सोमबार २२:४०
नेपालमा राजपालको तीन घण्टा
१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०७:५०
१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०७:४७